Sidee shaqo looga helaa Durrës? - ALinks
Sidee shaqo looga helaa Durrës?
Durrs waa magaalo deked ah oo ku taal galbeedka Albania, galbeedka Tirana, oo ku taal Badda Adriatic. Waxay caan ku tahay masraxa weyn ee Roomaanka.
Boggan waxay muujineysaa furitaanka shaqada Durrs; si aad u hesho shaqo dhameystiran, booqo bogga raadinta shaqada. Talo Top Job waa goob shaqo oo aad ka raadin karto oo aad ka codsan karto fursadaha adduunka ee hadda jira ee warshado kala duwan.
Gali cinwaanka emaylkaaga si aad u hesho digniino emayl shaqo oo leh fursado markii la helo.
Liis garee liiska ama xaddid raadintaada shaqooyinka Durrs adoo dooranaya goob, ka dibna gujinaya shaqo si aad wax badan uga barato ama u dalbato.
HALKAN waxaa ku yaal qaar ka mid ah Goobaha ugaarsiga shaqooyinka -
Wakaaladda shaqaalaynta - https://transcomalbania.recruitee.com/
Waxaa laga yaabaa 2, 2021
Waa imisa qiimaha ay ugu safarto Mexico?
Meelaha ugu Fiican ee lagu booqdo Faransiiska
Sidee shaqo looga helaa Japan ??
Hagaha Nidaamka Waxbarshada Thailand: Waxbarashada Bilaashka ah ilaa Heerka Koowaad